အားကစားသမား | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဘယ်ကြောင့်အင်ဒရူး Golota သူ Mike တိုင်ဆန်နှင့်အတူ2ပတ်ပတ်လည်ဖြတ်ခဲ့တာလဲ
အဘယ်ကြောင့် Andrzej Golota Mike Tyson နှင့်အတူ2ကြိမ်ပစ်ခဲ့တာလဲ Iron Mike ၏ 53rd Pro Fight: Tyson vs. Golota အချို့လက်ဝှေ့သမားများကလက်စွပ်တစ်ကွင်းတည်းတွင်စာလုံးနှစ်လုံးထားရှိခြင်းသည်အလွန်များနေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးဆိုတာဘာလဲ။ Interval လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းထန်မှုနှင့်တိမ်းညွတ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝန်ကိုပြောင်းခြင်း၏နိယာမနှင့်အညီပေါင်းစပ်ထားသည်။ သတိပြုရန်မှာကြားကာလလေ့ကျင့်ခြင်းသည်အလယ်အလတ်မှမြင့်မားသောပြင်းထန်သည့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးမားဆုံးစျေးမှာ? အဘယ်အရာကိုတော်မူလျှင်, သူပိုင်?
ကမ္ဘာပေါ်မှာအထိခိုက်ဆုံးထိခိုက်မှုလား? ထိုအရာကားအဘယ်သူနည်း၊ Scott Adkins သည်ခြေထောက်မှအပြင်းထန်ဆုံးကန်ကန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစွမ်းသတ္တိအကြောင်းပြောနေလျှင်ကီလိုဂရမ် (သို့မဟုတ်နယူတန်) တွင်တိကျသောနံပါတ်များအကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။
အိမ်တွင်သင်၏နားကိုမည်သို့ချိုးဖျက်နိုင်မည်နည်း။ ထို့အပြင်ပြည့်စုံမှုအတွက်သင်၏နှာခေါင်းကိုကောင်းစွာချိုး ဖျက်၍ ရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကိုချေဖျက်ပါ။ ထိုထက်ပိုသည်ဆိုပါက ...
အဆိုပါ tibia ၏အထက်ပိုင်းအတွက် acute နာကျင်မှု
tibia ၏အထက်ပိုင်းတွင်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှု PEROSTAL INFLAMMATION (SHINSPLINT) shinsplint ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် tibia ကိုအနာဖြစ်စေသည့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကား, ပထမ ဦး ဆုံးအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံး, posterior tibial ကြွက်သား၏ရွတ်ရောင်ခြင်း ...
သူကားအဘယ်သူအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ သူ Mike တိုင်ဆန်သို့မဟုတ်မိုဟာမက်အလီ
ဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ Mike Tyson သို့မဟုတ် Muhammad Ali သည်တိုင်ဆန်ကိုမွေးခါစက Muhammad သည် ၁၄ နှစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သူ့ကိုမျှရန်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ !!!! ကျိန်းသေဆွဲပါ။ ALI သည်နည်းပညာမဟုတ် - သူ ...
Giuliano Stroe ကွယ်လွန်သွားသို့မဟုတ်မခဲ့သလဲ
Giuliano Stroe သေပြီမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်၊ ဒါကသူမခိုင်မာတဲ့အမှားပါ။ ငါ့သားကသူအသက်ရှင်နေသမျှအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်
Trapezius ကြွက်သား (Latin musculus trapezius) သည်ပြားပြားကျယ်ပြန့်သောကြွက်သားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လည်ပင်း၏နောက်ဖက်နှင့်နောက်ဖက်ရှိအပေါ်ယံအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ Trapezius ကြွက်သားသည်တြိဂံပုံသဏ္hasာန်ရှိသည်။
ရုရှား MMA မှတိုက်လေယာဉ်များနှင့်တိုက်ခိုက်ရေး sambo အတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ
mma နှင့်တိုက်ခိုက်ရေး sambo တိုက်လေယာဉ်များသည်ရုရှားသို့မည်မျှရသနည်း။ UFC ရဲ့အဓိကအဖြစ်အပျက်အတွက်တိုက်လေယာဉ်တစ် ဦး ကဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ရသောအခါ၊ သို့သော်အဆုံးမှာ ...
Guy ရော့ခ် Lee ကရန်ရှိသည်ဘယ်သူနည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ Lee က၏အဘဖြစ်၏? Eh?
Guy-Rock Lee ကဘယ်သူလဲ။ သူကသူ့အဖေလား။ နှင့်? မေမေအဖွားဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ရော့ခ်လီ၏ဆရာမသာကြိုးစားအားထုတ်။ “ ပါရမီရှင်” ဖြစ်လာရန်ကြိုးပမ်းနေသောစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော Ninja တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ ...
ဂျိုးဖရေဇာနှင့်မိုဟာမက်အလီသည်တိုက်ပွဲမည်မျှဖြစ်ပွားခဲ့သနည်း။ ဂျိုးဖရေဇာနှင့်မိုဟာမက်အလီတွင်တိုက်ပွဲ ၃ ခုရှိခဲ့သည်။ ပထမအလီတွင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ၂ တွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။
အားကစားအတွက်ဗီတာမင် B1 B6 B12
အားကစားတွင်ဗီတာမင် B1 B6 B12 ကိုနေ့စဉ်ငါ B6 စားခဲ့သည် (ယခုတွင်လည်း) မသောက်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်၊ ၎င်းတို့မှသင်သေနိုင်သည်။ _) __) _) _) ပရိုတိန်း၏ကြီးထွားမှုအတွက်ဗီတာမင် B6 (pyridoxine) ပါဝင်သည်
ဘယ်လို dyhalku ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ကီလိုမီတာထက်ပို run လို့မရပါဘူး။ ငါ့ကိုတစ်ခုခုပြောပြ
ငါကီလိုမီတာတစ်ခုထက်ပိုပြီးမပြေးနိုင်တဲ့အသက်ရှူကိရိယာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။ ငါ့ကိုပြောပါ၊ သင်၏ပါးစပ်ပိတ်ထားသည့်တောင်ပေါ်သို့ပြေးပါ။ သင်၏ enta ရှူရှိုက်သူကိုဖမ်းမိပါလိမ့်မည်။
ကြွက်သားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ Synthol dumbbells နဲ့ barbells တွေထက်ဘာမှမရှိဘူး။ ငါ fuck ဆိုတဲ့ထိုင်နေတဲ့အကောင်းအဆိုး၊ AAS ဓာတုဗေဒနဲ့စသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကြားရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
အတိတ်ကိုလေ့လာရေးခရီး ... အင်းဂါအာသာမွန်နိုကဘယ်သူလဲ။
အတိတ်ကိုလေ့လာရေးခရီး ... အင်းဂါအာသာမွန်နိုကဘယ်သူလဲ။ စစ်ပွဲစဖြစ်ချိန်၌မိန်းကလေးသည်အသက်ငါးနှစ်မပြည့်သေးပါ။ သူတို့သည်လက်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးအချို့ရောဂါများသည်သူမနှင့်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြက်ပင်များကဲ့သို့ပါးလွှာသည်။ သို့သော်တစ်ကြိမ်…
သိန် Cara vs rey Mysterio
Rei Misterio vs Shin Kara Rei Shin Flying Shin Kara ကပိုကောင်းတယ်! Ignacio Almansa - Rey Mysterio ၏အစောဆုံးအမည်များထက်။ လက်စွပ်တွင်နာမည် :: Sin kara ။ အတ္ထုပ္ပတ္တိအတ္ထုပ္ပတ္တိ: Ignacio Almansa (ဖွား ...
အကြီးမြတ်ဆုံးဘော်လီဘောကစားသမား? ငါကဒီအားကစားမှာအားမကောင်းဘူး။ Katya Gamova ကလွဲရင်ဘယ်သူမှမသိဘူး။ BEST VOLLEYBALL PLAYER - ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု - ရှစ်ဆယ်ကျော်အကုန်တွင်ဆိုဗီယက်မဂ္ဂဇင်းမှအားကစားသည်ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများအား ...
Soest + ကုန်းပတ်ထက်ပိုသောမှန်ကန်စွာခံယူသကဲ့သို့, သင်တန်းဖွဲ့စည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်
Sust + deca သည် ၄၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်တစ်ပတ်လျှင်၊ သီတင်းပတ် ၈ ပတ်အားဖြင့်ပိုမိုမှန်ကန်စွာမည်သို့ယူရမည်ကိုသင်ကြားသည်။ တတိယမြောက်သင်တန်းအတွက်လုံလောက်သည်။
စုပ်စက်ကဘာလဲ !!!! Pumping - လူတိုင်းပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီဟာကကြွက်သားတွေပါလာတာပါ။ (fascia ကိုတိုးချဲ့ဖို့အတွက် (မူလနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်ကြွက်သားများအိတ်များတည်ရှိသည်) ...
သူကိုသူ Mike Zambidis ရိုက်နှက်ကြသလော
ဘယ်သူက Mike zambidis ကိုရိုက်နှက်? မွေးဖွားသည့်နေ့ - ဇူလိုင် ၁၅၊ ၁၉၈ မွေးဖွားသည့်နေရာ - အေသင်၊ ဂရိအမြင့် - ၁၆၇ ​​စင်တီမီတာ။ အလေးချိန် ၇၀ ကီလိုဂရမ်။ ပုံစံ - Kickboxing Michalis Zambidis (Mike Zambidis) - ဂရိ ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,984 စက္ကန့်ကျော် Generate ။